Brandt dia mamorona orinasa mpamokatra fitaovana iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Brandt dia mamorona orinasa mpamokatra fitaovana iraisam-pirenena
Brandt Tractor Ltd., sampana iray manontolo ao amin'ny Brandt Group of Companies, dia faly manambara fa nahazo ny Cervus Equipment Corp., taorian'ny fankatoavana 97.66% ny fifanarahana tamin'ny fifidianana tamin'ny 12 Oktobra 2021 nataon'ireo tompon'andraikitra Cervus. Ny fifampiraharahana dia mahita ny Cervus amidy ampahibemaso ho an'ny fananana manokana 100% amin'ny fifanarahana ara-bola rehetra.
Ny fifampiraharahana manan-danja dia mamorona tambajotra mpivarotra fitaovana lehibe indrindra any Kanada, manampy toerana fambolena, fitaterana ary fitaovana fitantanam-bola 64 amin'ireo mpivarotra John Deere Construction & Forestry efa misy an'i Brandt manerana an'i Kanada. Rehefa tafiditra tanteraka, dia hanome ny mpanjifan'i Cervus ny fidirana amin'ireo ampahany nasionalin'i Brandt sy fotodrafitrasa fanohanana ara-teknika.
Ny fividianana dia mametraka bebe kokoa ny toeran'ny orinasa amin'ny maha-orinasa kanadiana tsy miankina voalohany ary mpivarotra John Deere lehibe indrindra eran-tany.
"Fandresena lehibe ho an'ny mpanjifa amin'ny tsena rehetra voakasik'izany ny fanampiana ny tambajotran'ny sampana Cervus," hoy i Shaun Semple, tompon'ny Brandt sy CEO. "Betsaka ny zavatra azonay atolotra ary vonona izahay ny hanongotra ny tananay ary hahazo ny tsy fivadihan'ny mpanjifanay vaovao amin'ny alàlan'ny fampifangaroana vokatra sy serivisy avo lenta ary traikefa fanohanana mpanjifa tsy tapaka sy avo lenta."
Ny fifanarahana dia manome an'i Brandt fidirana amin'ny tsena tsy manam-paharoa, manitatra ny dian-tongotr'izy ireo ara-jeografika ary manome fahafahana ny orinasa hanampy, amin'ny tsena voafantina, fitaovana fambolena John Deere; fitaovana fitaterana Peterbilt; ary Clark, Sellick, JLG, Baumann ary fitaovam-pikarakarana fitaovana hafa ankoatra ny lisitry ny vokatra sy serivisy efa manaitra.
Miaraka amin'ny fahazoana ny toerana Cervus any Kanada, Aostralia ary Nouvelle-Zélande, Brandt izao dia manana sy miasa amin'ny fivarotana fitaovana 120 feno serivisy miaraka amin'ny teboka serivisy 50+ fanampiny ary mampiasa olona 5100 mahery.
Ny fifampiraharahana dia hisy fiatraikany lehibe manerana ny indostria satria ny orinasa dia mikasa ny hampiditra ny fitehirizam-bokatra miitatra, ny fahafahan'ny departemantan'ny serivisy ary ny ora fiasana maharitra any amin'ireo mpivarotra Cervus teo aloha. Raha ampidirina ny asa dia andrasana hitombo hatramin'ny 40% ny mpiasa amin'ireo toerana ireo miaraka amin'ny fananganana trano vaovao lehibe manerana ny tambajotra manontolo.
"Ny mpiasan'ny Cervus, ny mpanjifa ary ny vondron'izy ireo dia samy hahazo tombony amin'ity fahazoana ity amin'ny alàlan'ny tambajotra matanjaka kokoa sy maro kokoa amin'ny mpivarotra fanohanana," hoy i Semple namarana. “Ny Brandt dia manolo-tena tanteraka amin'ny fampiasam-bola mitohy amin'ny fotodrafitrasa fandraharahana sy ny fanatsarana ny fiaraha-monina; misy fahafahana lehibe ho an'ny rehetra amin'ity fifanarahana ity. "
Nikatona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 22 Oktobra 2021 ny varotra.
Ny fanakatonana COVID-19 vaovao any Netherland no voalohany ...